उखु किसान र उद्योगीबीचको भुक्तानी विवाद : पक्राउ गर्ने पत्राचारपछि उद्योगी मन्त्रालयको सम्पर्कमा – खोज केन्द्र
» खेलकुद » शिक्षा/कला » समाचार » सूचना/प्रविधि » स्वास्थ्य अंक: 568
उखु किसान र उद्योगीबीचको भुक्तानी विवाद : पक्राउ गर्ने पत्राचारपछि उद्योगी मन्त्रालयको सम्पर्कमा
खोज केन्द्र बुधबार, पौष १६, २०७६ मा प्रकाशित
उखु किसानको भुक्तानी नतिर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि त्यस्ता चिनी उद्योग सञ्चालक मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छन् ।
संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलवारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री भट्टका अनुसार अन्नपूर्ण सुगरका राकेश अग्रवाल र महालक्ष्मी सुगरका वीरेन्द्र कनोडिया मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका हुन् । विगत ६ वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै सर्लाही, नवलपरासी र रौतहटका किसानहरू उखुको बाँकी बक्यौताको मागसहित २ सातादेखि संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनरत किसानका अनुसार श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र वागमती सुगर मिलले करीब ५ हजार उखु किसानलाई हालसम्म करीब रू. १ अर्ब ४१ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
यसका साथै सरकारले किसानलाई प्रतिक्वीन्टल ६५ रुपैयाँ ६७ पैसा अनुदान दिने बताएकोमा उक्त अनुदानबापतको करीब १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पनि नपाएको गुनासो किसानको छ ।
उखु किसानको आन्दोलन चर्किएपछि मन्त्रालयले ती उद्योगका सञ्चालकलाई सम्पर्क गरेकोमा अन्नपूर्ण र महालक्ष्मीसँग सम्पर्क हुन सकेको थिएन । त्यसपछि सम्पर्कविहीन २ मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गरी मन्त्रालयमा उपस्थित गराइदिन कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमवार गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
मंगलवार गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पक्राउ गर्न पत्र लेखेपछि उद्योगीहरू सम्पर्कमा आएका हुन् ।
हाल देशभर १४ ओटा चिनी उद्योग रहेकोमा ८ ओटा उद्योगले भने समयमै भुक्तानी गरिरहेका छन् । बाँकी उद्योग भने कृषकको भुक्तानी नदिई अहिले बन्द अवस्थामा रहेको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।
उनका अनुसार अन्नपूर्णले सबैभन्दा बढी रू. ५१ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तै श्रीरामले रू. ४२ करोड र महालक्ष्मीले रू. २१ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मिल सञ्चालक र कृषकबीच सरकारले तोकेको दरमा ४५ दिनभित्र किसानलाई उखुको भुक्तानी दिनुपर्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने नभएको किसानको आरोप छ ।
उद्योगीले भारतबाट चिनी आयात भएकाले देशमा उत्पादित चिनी नबिकेको भन्दै सम्झौताअनुसार मूल्य तिर्न नसक्ने भनी किसानलाई भुक्तानी नदिने गरेको महासंघका अध्यक्ष मैनालीले बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटकपटक छलफल गरी भुक्तानी गर्ने सहमति भए पनि किसानले भुक्तानी भने पाएका छैनन्,’ उनले भने ।
चिनी मिल मालिकले किसानको भुक्तानी नतिरेको भन्दै यसअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले गृहसँग सहकार्य गरी उद्योगीलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसबेला प्रहरीले अन्नपूर्ण सुगर प्रालिका सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ पनि गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उखु किसान र उद्योगीबीच तत्काल बक्यौता रकम तिर्ने सहमति भएकोमा हालसम्म पनि उक्त भुक्तानी किसानले पाएका छैनन् ।
मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएपछि उखु उद्योगीले किसानको बक्यौता रकम तिर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको उद्योगमन्त्री भट्टले बताए । ‘उद्योगीले किसानको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने र उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित केही समय मागेका छन्,’ उद्योगमन्त्री भट्टले भने । यसका लागि मन्त्रालयले लिखित सम्झौताको तयारी गरेको उनले बताए ।